Nhau - Trendy yekuwedzera-iyo yakajeka mamiriro eiyo yoga bhurukwa
Trendy yekuwedzera-iyo yakajeka mamiriro eiyo yoga bhurugwa
Sechinhu chakakosha muiyoga uye kugwinya, kuumba muviri bhurugwa kuri kuwedzera kukosha. Partial dhizaini inonyanya kukosha. Pahwaro hwekuona mashandiro emitambo, kutarisisa kwakawanda kunoitwa kune hunhu uye fashoni pfungwa. Inogadzirirwa yakadzama dhizaini inogona kuita zvakajairika kugwinya zvitaera kumutsidzira. . Chirevo ichi chinoshandisa chiuno chigunwe kushongedzwa, chakasanganiswa kupaka dhizaini, tsoka tsananguro, tsoka muromo shanduko, yekuwedzera kushongedza dhizaini, uye seksikä hollowing seiyi huru axis yekunatsiridza hunyanzvi uye dhizaini zvinhu zvinoshandiswa imomo, uye kuunza kurudziro kune vagadziri kugadzira zvigadzirwa zvitsva.
Muchinjikwa-wakaumbwa chiuno ruzivo dhizaini inogona nani kugadzirisa iyo yechiuno curve uye kuratidza yechikadzi chiuno; chiuno dhizaini yegore ra2022 chirimo uye zhizha yoga bhurugwa rine zvimwe shanduko, uye musiyano wemavara wave dhizaini dhizaini uye musiyano wevaravara muchinjikwa-wakaumbwa webhu inosanganisirwa mukati meYoga inowedzera mufashoni uku ichiwedzera kubata kwekufamba; kechipiri, chiuno chemuchinjikwa chinogona kuburitswa kunze, kuchiratidza kubata kwechikadzi chiuno chiuno, seksikäs uye fashoni.
Iyo yakadzama dhizaini yetsika-pane iyo yoga bhurugwa inopa basa rekutsigira rutsoka kana rwakatambanudzwa zvakanyanya, kudzivirira tsoka kubva kutsvedza uye kudzivirira kunonyadzisa; rutsoka rwemutsva-rutsoka rwemwaka mutsva rwune fashoni uye rwakasiyana, uye musiyano wekusona machira uye mapatani akabatanidzwa Kuwedzera zvinongedzo kumabhodhoro akazara, zvinokurudzirwa kuti chirimo nezhizha ra2022 zvinogona kuburitsa bhurugwa-nhanho-rinotsika, nemabhatani ekushongedza pamusuwo wekuvhura wekugadzirisa, uye vatengi vanogona kugadzirisa tsoka-nhanho ruzivo pachavo. Panguva imwecheteyo, inogona kuenzaniswa neakasiyana-siyana etsoka-nhanho ribhoni chipo mabhokisi. Vatengi vanogona kusarudza pamadiro, izvo zvinowedzera kunakidzwa kwevatengi uye zvinogona kusangana zvirinani nezvavanoda. Pamusoro pekutsika-tsoka tsoka tsoka, yepakutanga yakatarwa yekuyambuka-pamusoro peketani dhizaini inogona kuratidza zvirinani seksiketi makumbo evakadzi;
Dhizaini yekuvhura kwetsoka ndiyo yakajairika dhizaini dhizaini inoshandiswa nevagadziri. Maitiro ekuita zvitsva uye fashoni ndizvo zvatinofanira kufunga; kune yekuvhura tsoka dhizaini yemwaka mutsva, iwe unogona kuyedza yakawanda hollowing kurapwa, uye kugadzirisa chigamba chinotonhorera pamucheto pamhango. Kechipiri kurukwa kweiyo yepakutanga base multi-mabhendi kunowedzera fashoni pfungwa yeiyo yakazara trousers. Iko kusonwa kweiyo yakajeka micheka yesilika machira ane asymmetrical muchinjikwa-kuvhura kwakakodzera kutariswa mukati megore uye zhizha ra2022.
Rutivi rwechiuno rwakagadzirwa nemabhegi madiki anochinjika uye anowanikwa. Iko kushongedza kunofuridzirwa nehembe dzekunze, izvo zviri nyore kurodha zvinhu. Inogona zvakare kushandiswa sekushongedza mumabhuruku eyoga. Inogona zvakare kuita kuti vashambadzi vabude kuenda kuhutano uye kurongedza zvidiki zvidiki sekuwana makadhi ekuwana uye makiyi, izvo zvinovandudza zviri nyore; Bhandeji rinogadzikika rinogona kupeterwa parutivi rwechiuno, kuitira kuti vatengi vagone kugadzirisa chiuno kusununguka pachavo, uye pfungwa yemafashoni yakapetwa kaviri.
Iyo nzira yekuhomba ichaenderera ichishandiswa mukati megore uye zhizha ra2022. Nzvimbo inovhara ichawedzera mumwaka mutsva. Panguva imwecheteyo, saizi yekuvhara ine maitiro akakura kupfuura kare, uye inoratidza iko kwekutanga kugadzira maoko, kuratidza kukwirira. Uye seksikäs.
Post nguva: May-06-2021